Ny 'Hatching' dia manambara zazavavy 12 taona izay mikarakara atody misy fampihorohoroana mihoatra ny finoana
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny 'Hatching' dia manambara zazavavy 12 taona izay mikarakara atody misy fampihorohoroana mihoatra ny finoana
Ity dia toa ... manelingelina
by Trey Hilburn III Janoary 13, 2022
by Trey Hilburn III Janoary 13, 2022 8,754 hevitra
IFC Mamatonalina dia nirotsaka an-tsehatra hatramin'ny farany. Ny tranofiara ho an'ny Fanatodihana dia iray amin'ireo tranofiara izay miditra ao ambanin'ny hoditrao. Avy amin'ny famolavolana feony mandady ka hatramin'ny paleta miloko miolikolika, ity sarimihetsika ity dia mitady fampitahorana amin'ny alàlan'ny famonoana cinematic kanto. Ilay tranofiara hafahafa toy ny helo dia nanome anay ny hatsiaka.
Indray andro, raha niara-nipetraka tamin'ny fianakaviana iray mampatahotra, dia nisy vorona nanidina niditra tao an-tranon'ny tovovavy iray. Ny fihaonan'ny kisendrasendra dia nifarana tamin'ny nahitany atody mistery izay nanapa-kevitra ny hanangana sy hanao akany ho toy ny reniny ilay tovovavy. Ankehitriny, izay mivoaka avy amin'ny atody dia ny zavatra mampihorohoro lahatsoratra Lovecratian.
Izay toa manomboka ho toy ny nofy ratsy matin'ny sola, dia lasa zavaboary izay toa manahaka sy mitaratra ny an'ilay tovovavy. Izany dia mitarika ho amin'ny fitaizan'ilay tovovavy kambana mihetsiketsika amin'ny vatana.
Ny synopsis ho an'ny Fanatodihana mandeha toy izao:
Tinja, 12 taona, dia maniry mafy ny hampifaly ny reniny, vehivavy variana amin'ny fanolorana ny endriky ny fianakaviana tonga lafatra. Indray alina dia nahita atody hafahafa i Tinja. Tsy azo inoana izay foy.
Tena talanjona izahay tamin'ity nofy ratsy angano ity. Ity angano finlandy ity dia mikasa ny haka ny toetran'ny fampihorohoroana folk ary koa ny fahatsapana horohoro mamaly faty.
Ny sarimihetsika dia kintana Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Saija Lentonen, Jani Volanen ary tarihin'ny Hanna Bergholm.
Fanatodihana tonga any amin'ny teatra sy amin'ny VOD manomboka ny 29 aprily.